trainjourney Archives | Londoloza Isitimela
Ikhaya > trainjourney
Kugqashuka samanje kumacebo coronavirus Simoni wonke umuntu ku-zibangelwa, kungaba nzima ukwazi ukuthi kufanele ugcine uhambo lwakho ngesikhathi coronavirus noma cha. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s important…
Njengoba zonke azi, Venice lingumuzi kakhulu oyingqayizivele ajabulisayo wonke kulo lonke elaseYurophu, uma kungekhona ukuthi emhlabeni wonke. AmaNtaliyane wenza ngokuphelele aphume yeNayile nazo amavesi encane, konke okuyizinto amanga esiqhingini. Lokhu uye waphenduka edolobheni komunye…
Kuningi ukuba uthando mayelana Paris. Kuphi ngisho ukuqala, kwesokudla? Into efika kuqala emqondweni amasayithi ezinhle ezifana ne-Eiffel Tower kanye Louvre. Kodwa kungani hhayi futhi bethola amagugu afihliwe emzini? Make siqale…
IYurophu inenye futhi ikhubalo ezithile ebusika phakathi nezinyanga ezibandayo ukuthi abafani nanoma yiziphi indawo emhlabeni. Kukhona okuningi ezihlukahlukene, futhi akukho izindawo ezimbili babe nomuzwa ofanayo kanye nomkhathi. Empeleni, abantu abaningi bathi emadolobheni amancane namakhulu ngesikhathi…
Europe uphefumulela abaculi kanye nabenzi bamabhayisikobho ezivela emhlabeni wonke, ngakho akumangalisi ukuthi uheha abenzi ifilimu ngokufanayo! Thola 5 Famous Film Izindawo e-Europe kanye ukubhuka emaholide akho nemisebenzi ukuba Gxila amafilimu eziyizintandokazi zakho kuze kube iholidi ngaphambi ephelele ne European…
Milan eRoma ngu zemininingwane noma eRoma Milan yintfo kube lula futhi kuhleleke. Ingasaphathwa amahle! Ungathatha isitimela eshibhile esingathatha isikhathi eside ukwedlula 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…
Europe ugcwele ezinye Emigwaqweni Emnandi Kunazo Zonke. Kusukela nenhle kunazo futhi ezimibalabala kuya engavamile. Ezinye Emnandi Kunazo Zonke Streets EYurophu kakade wathola futhi kahle nime ithrekhi izivakashi kodwa abanye amagugu zangempela kufihlwe ukuthi kuphela…
Italy ingenye ethandwa izivakashi izindawo kakhulu emhlabeni. Abantu bathutheleka izwe ukudla kumnandi, isiko, kanye nomlando ocebile. Empeleni, ungenalo ngisho ukuba uvakashele emadolobheni amakhulu ukuzwa the izintelezi of Italy. Isibonelo esihle…